Shin Hye-sun x Kim Jung-hyun 'Mr. Queen' ဟာသ Fantasy နန်းတွင်း ဒရမ်မာ၏ လူကြိုက်များမှုနှင့် အငြင်းပွားမှုများ - 빵야뉴스
승인 2020.12.16 20:34
[BBANGYA News | Reporter Mo Mo] စနေ-တနင်္ဂနွေဒရမ်မာဖြစ်သော 'Mr. Queen' သည် တရုတ်ဝဘ်ဒရာမာ'Go Princess Go'ကို remakeလုပ်ထားသော ဇာတ်ကားဖြစ်သည်။
ဤဒရမ်မာသည် Joseon မင်းဆက်၏ ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့ စိတ်ဝိညာဉ် ဝင်သွားပြီး နန်းတွင်းတွင် ရှင်သန်မှုကို ဖော်ပြသည်။ Blue House စားဖိုမှူး၏ နေရာအထိ ရောက်ခဲ့သည့် Jang Bong-Hwan (Choi Jin-hyuk) သည် မရိုးမသားပြုမူမှုများနှင့်မျက်နှာနှစ်ဖက်၏ ဘုရင်ဖြစ်သော Kim Jeong-hyun နှင့် သဘောမတူမှုတို့ကြောင့် မတော်တဆမှုတစ်ခုတွင် အပြောင်းအလဲကို ပြတဲ့ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ် ဖြစ်ပါသည်။
'Mr. Queen' ဇာတ်ကား၏ ပရိသတ်ကြည့်ရှုနှုန်းသည် မြို့ပြတွင် ပျမ်းမျှအားဖြင့် ၉.၅% နှင့် အများဆုံး ၁၀.၉% တွင်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးပျမ်းမျှ ၈.၈% နှင့်အများဆုံး ၉.၉% ရှိသည်။ tvN targetထားအမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး ၂၀၄၉ ကိုကြည့်ရှုသူအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အရ မြို့ပြအပါအ၀င် ချန်နယ်အားလုံးတွင် ၅.၁ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ၅.၄% ပထမနေရာတွင်ရှိပြီး၊ တစ်ချိန်တည်းတွင် ချယ်နယ်အားလုံးတွင် လူကြိုက်အများဆုံး ရရှိခဲ့သည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ အငြင်းပွားဖွယ်ရာများဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီး စိတ်၀င်စားမှုသည် ရှေ့လျောက် ကြည့်ရှုနှန်းတွင်အာရုံစိုက်နေကြသည်။ 'Mr. Queen' ကိုရုပ်မြင်သံကြားမလွှင့်မီ စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသော စာရေးဆရာတစ်ဦး၏လုပ်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုခဲ့သည်ဟုစွပ်စွဲခံရသည်။ မူရင်းဝတ္ထုကို ရေးသားသူ Seondeung သည် ယခင်ကကိုးရီးယားလူမျိုးများကို နှိမ့်ချအငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်သော 'Hwachin Princess' ကိုရေးသားသူဖြစ်သည်။
'Mr. Queen'၏ မူရင်းဝတ္ထု 'Go Princess Go' စာရေးသူ၏ ယခင် ဝတ္ထု 'Hwachin Princess'သည် စိတ်ကူးယဥ် လက်တွေ့ကမ္ဘာဖြစ်သည်။ သို့သော် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဖြစ် အမှန်တကယ်တည်ရှိခဲ့သော ' Goryeo' ကိုမရေမတွက်နိုင်အောင် အသုံးပြုထားတာကို တွေ့ရသည်။ ထို့အပြင် ဇာတ်ကောင်သည် စားပွဲခင်းကို Hanbok ကဲ့သို့ Goryeo လူမျိုးများကို လှောင်ပြောင်သည့်sceneတစ်ခုရှိသည်။
တစ်ဖက်တွင် tvN ၏ စနေ-တနင်္ဂနွေဒရမ်မာ 'Mr. Queen'ကို စနေနေ့နှင့် တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း ညနေ ၉ နာရီတွင် ထုတ်လွှင့်သည်။